Esoatiny - Wikipedia
Sainam-pirenen' i Esoatiny
Sarin-tanin' i Esoatiny
I Esoatiny ao Afrika
I Esoatiny (anglisy: Eswatini); esoaty: eSwatini) dia firenena kely ao amin' ny faritra atsimon'i Afrika. Soazilady no anarany talohan' ny taona 2018. Mpikambana ao amin' ny Commonwealth izy. I Mbabane no renivohiny. Saika voahodidin' ny tanin' i Afrika Atsimo izy ary i Môzambika no miray sisin-tany aminy ao atsinanana. Tamin' ny 6 Septambra 1968 no nahazoany ny fahaleovan-tenany. Manana velaran-tany mirefy 17 363 km2 izy. I Pigg's Peak no tendrombohitra avo indrindra any, izay mahatratra 1 900 m. I Komati sy i Grand Usutu ary i Umbeluzi no renirano telo lava indrindra any. Indraindray koa izy antsoina hoe Ngoane (anglisy: Ngwane). Atao hoe Esoatiniana na Soatiniana ny vahoak' i Esoatiny izay nahatratra 1 104 479 tamin' ny taona 2020. Ny teny hoe eSwatini dia midika hoe "tanin' ny Soazỳ". Fanjakà-mpanjaka i Esoatiny ka ny mpanjakany amin' izao (2021) dia i Mswati III.
Ny fiteny soaty, izay ao amin' ny fianakaviam-piteny banto, sy ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialin' i Esoatiny. Miteny soaty ny 90 %n' ny Soazy fa ny 0,6 % ihany no miteny anglisy. Misy fiteny banto hafa koa tenenina ao amin' io firenena io. Ny ankamaroan' ny Esoatiniana dia Kristiana (80-88 %) fa misy koa ny Miozolmana (5-10 %), misy koa ny Hindo sy ny Bahay ary ireo mpanaraka ny fivavahan-drazana afrikana animista.
Miara ho distrika efatra i Esoatiny, dia ny distrikan' i Hhohho, ny distrikan' i Lubombo, ny distrikan' i Manzini ary ny distrikan' i Shiselweni.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Esoatiny&oldid=1040788"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:05 ity pejy ity.